धूलोले ढाक्यो कोरिया, कहिले सम्म रहन्छ त यो? कसरी जोगिने धूलोबाट? – Eps Sathi
February 13, 2022 407
हिजो शनिवार बाट नै दक्षिण कोरियालाई धूलोले ढाकेको छ। देशभरका सबैजसो क्षेत्रमा धूलो देखिएको छ। धूलो कै कारण यहाँको सरकारले इमरजेन्सी इमिसन रिडक्सन मेजर लागू गर्नुपरेको छ। धूलोका कारण वातावरण प्रदुषित भएसँगै हावाको गुणस्तर घटेको पाइएको छ।
कोररियाको नेशनल इन्स्टिच्युट अफ इनभाइरोमेन्टल रिसर्चका अनुसार शनिवार विहान कोरियाको राजधानी सउल र त्यस वरपरको क्षेत्र तथा छुङछन नाम्दो तथा छल्लाबुक्दो क्षेत्रमा हावाको गुणस्तरलाई ‘धेरै खराब’ को सूचिमा राखिएको छ। हावामा धूलोको मात्रा अत्याधिक भएपछि यसलाई धेरै खराबको सूचिमा राख्ने गरिन्छ।
दक्षिण कोरियाले हावामा भएको प्रदुषणलाई ४ भागमा बर्गिकरण गर्ने गरेको छ। वातावरण सफा हुँदा हावा राम्रो भएको अवस्थामा यसलाई ‘राम्रो’ सूचिमा राखिन्छ भने हावामा अलि अलि प्रदुषण भएको खण्डमा यसलाई ‘‍औषत’ को सूचिमा राखिन्छ। त्यसैगरी हावामा प्रदुषणको मात्रा बढेको खण्डमा ‘खराब’ को सूचिमा राखिन्छ भने एकदमै धूलो हावामा भएको पाइएमा यसलाई ‘धेरै खराब’ मा सूचिकरण गरिन्छ।
कोरियाको नेशनल इन्स्टिच्युट अफ इनभाइरोमेन्टल रिसर्चका अनुसार कोरियाभर केहि दिन अझै हावाको गुणस्तर छेजुदो टापुबाहेकका क्षेत्रमा खराब नै रहने बताइएको छ। हावामा धूलोको मात्रा बढेसँगै यहाँको सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागले कोरियाको राजधानी सउल र त्यस वरपरको क्षेत्र, सेजोङ सहर, छुङछनबुक्दो क्षेत्र तथा छल्लानाम्दो प्रदेशमा इमरजेन्सी अलर्ट जारी गरेको छ।
कोरियामा अझ केहि दिन यस्तो धूलो हावामा रहने बताइएको छ। नेशनल इन्स्टिच्युट अफ इनभाइरोमेन्टल रिसर्चका अनुसार सोमबार सम्म देशभरका सबैजसो शहरहरुमा हावाको गुणस्तर कमै रहनेछ। सोमबार पछि भने विस्तारै धूलोको मात्रा कम हुँदै जाने र हावा स्वच्छ हुँदै जाने विस्वास गरिएको छ।
Prevफेब्रुअरीको अन्तिमबाट जापानले विदेशीहरुलाई प्रवेस अनुमति दिने
Nextइजरायल जान कति खर्च लाग्छ? मासिक कमाई कति हुन्छ? जानौं प्रकृया